ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ January 8, 2022 at 7:03 AM
ကြောက်ခေတ်ကို ငါတို့ခေတ်မှာတင် အဆုံးသတ်ပစ်ကြစို့။
Yati Win February 26, 2022 at 5:58 AM
Unknown February 26, 2022 at 7:12 PM
ခွေးပုနဲ့ အတူ မကောင်းသော စနစ်ပါ တခါတည်း ကျရှုံးတော့မည်။
kyawkyawmyaing February 28, 2022 at 8:49 PM
အမြန်ဆုံး အပြိးတိုင် အမြစ်ဖြတ်ချေမှုန်းပြစ်ရမယ်
moe aung March 1, 2022 at 1:42 AM
Unknown March 1, 2022 at 11:37 PM
ငါတို႔မ်ိဳးဆက္‌မွာ အျမစ္‌ျဖတ္‌ၾကမယ္‌ အာဏာ႐ူး‌ေတြကို ����������
M February 26, 2022 at 5:54 AM
Yati Win February 26, 2022 at 5:56 AM
Nway Khon Cho February 26, 2022 at 5:57 AM
Ko Gyi Kyaw February 26, 2022 at 5:58 AM
Unknown February 26, 2022 at 6:01 AM
We must win 💯💯💯
Chu Zim February 26, 2022 at 6:02 AM
ဟယ် link အသစ်လား
Chu Zim February 26, 2022 at 6:03 AM
နှစ်သီးစားမို ၁၀စက္ကန့်နေပေးကြပါနော် ကိုယ့်လူတိုရေ
PaPaWaDe February 26, 2022 at 6:56 AM
Unknown March 1, 2022 at 8:42 AM
Unknown March 1, 2022 at 9:06 AM
Unknown March 2, 2022 at 6:54 AM
You so beautiful°-°
Unknown February 26, 2022 at 6:18 AM
Min Khant Si Thu February 26, 2022 at 6:22 AM
Myint Win March 5, 2022 at 7:41 AM
စစ်အုပ်ချူပ်ရေး ပျက်သုန်း သည်အထိ
Sai Min Oo February 26, 2022 at 6:33 AM
Madella February 26, 2022 at 6:40 AM
Well noted ✨
Unknown February 26, 2022 at 6:43 AM
ဂျူနီယာ မင်းမင်း February 26, 2022 at 6:51 AM
Lynn Thu February 26, 2022 at 6:59 AM
Noreen February 26, 2022 at 7:05 AM
Saw pho htoo February 26, 2022 at 7:39 AM
khin February 26, 2022 at 7:41 AM
we must fight and win.
Thinn February 26, 2022 at 7:46 AM
Lwin Lwin February 26, 2022 at 8:16 AM
hoyfound February 26, 2022 at 8:25 AM
Unknown February 26, 2022 at 9:31 AM
Jully mon February 26, 2022 at 9:33 AM
နှစ်သီးစားတဲ့ ကြိတ်လိုက်ကြစို့ 🤜🤛🤜🤛🤜🤛
Sammi February 26, 2022 at 3:56 PM
Unknown February 26, 2022 at 5:53 PM
ကိုမောင် February 26, 2022 at 5:58 PM
Unknown February 26, 2022 at 6:04 PM
Unknown February 26, 2022 at 6:27 PM
kyawmyingyan March 1, 2022 at 10:42 PM
Tauremini February 26, 2022 at 6:53 PM
Unknown February 26, 2022 at 7:10 PM
Unknown February 26, 2022 at 7:17 PM
Lwin Lwin February 26, 2022 at 7:41 PM
Click for 💄
BoTun February 26, 2022 at 7:49 PM
thar pu February 26, 2022 at 8:30 PM
Unknown February 26, 2022 at 8:36 PM
Joseph Kyaw Min Tun February 26, 2022 at 8:48 PM
Unknown February 26, 2022 at 8:51 PM
Meelaysote February 26, 2022 at 8:56 PM
Thet Oo February 26, 2022 at 8:59 PM
Thet Oo February 26, 2022 at 9:00 PM
Miτsuha February 26, 2022 at 9:02 PM
လင့်တွေက medical4myanmar က လွဲပြီး ကျန်တဲ့ လင့်တွေ padaytharp2p ကအစ ဝင်မရပါဘူး။ thapyaynyo ထဲပဲ ရောက်ပြီး 404 not found ဖြစ်နေပါတယ်။
Nor Poe 🥰 February 26, 2022 at 9:12 PM
တူမီးတွေနဲ့ မဖြစ်သင့်တော့ဘူး.. တစ်လနည်းနည်းစီ လှူနေတာလည်း တစ်နှစ်ပြည့်ခါနီးနေပြီ... အလှူငွေများ မြေပြင်ဒေသကို ထိထိရောက်ရောက် ရောက်ရှိနိုင်ပါစေ
Unknown February 26, 2022 at 9:35 PM
naychi February 26, 2022 at 10:01 PM
Unknown February 26, 2022 at 10:18 PM
BoTun February 27, 2022 at 5:48 PM
Zin Mar Htwe February 26, 2022 at 11:53 PM
ကျွန်တော်တို့ဟာ အမှန်တရားအတွက် လွတ်လပ်မှုအတွက် ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ မဆုတ်တမ်း တိုက်ပွဲဝင်ကြပါရမယ်။
Saw War Say February 27, 2022 at 1:08 AM
Phyu February 27, 2022 at 1:16 AM
Tu Tu February 27, 2022 at 1:21 AM
Phyu February 27, 2022 at 1:45 AM
Unknown February 27, 2022 at 2:41 AM
Unknown February 27, 2022 at 2:44 AM
Unknown February 27, 2022 at 3:39 AM
ကိုမောင် February 27, 2022 at 4:26 AM
Unknown February 27, 2022 at 4:52 AM
Thanks sayar ko phyo
Khin Thet Mon February 27, 2022 at 5:10 AM
NAGA February 27, 2022 at 5:50 AM
Unknown February 27, 2022 at 6:18 AM
Unknown February 27, 2022 at 6:29 AM
Bogyoke Hmugyi Maaloe February 27, 2022 at 6:36 AM
Take Care All...💪💪💪
ကိုကြီးကလစ် February 27, 2022 at 6:43 AM
Unknown February 27, 2022 at 6:46 AM
hoyfound February 27, 2022 at 7:02 AM
Nobel February 27, 2022 at 7:08 AM
Sweet February 27, 2022 at 7:40 AM
Clicker တွေ fighting
Mario February 27, 2022 at 8:35 AM
kono dio da February 27, 2022 at 4:57 PM
Unknown February 27, 2022 at 5:35 PM
Nguwar February 27, 2022 at 6:14 PM
Hein February 27, 2022 at 6:20 PM
Saw War Say February 27, 2022 at 6:52 PM
Dr.Win Htun February 27, 2022 at 8:56 PM
Shaun Murphy February 27, 2022 at 11:26 PM
ကြိုးစား Click နေပါသည်
Tanzin Cho February 28, 2022 at 1:46 AM
Unknown February 28, 2022 at 3:11 AM
mon. star. 7797 February 28, 2022 at 4:43 AM
မီးလာလို်ခုမှာကလစ်ရတဲ့ နေ့လည်၂ခွဲကျော်ကတဲ့က ပျက်တာ ကလစ်တာ တာဝန်တခုလိုဖစ်နေပီ ☺
Unknown February 28, 2022 at 5:30 AM
pdf တွေ ဘေးကင်းပါစေ 💪❤
Myint Naing February 28, 2022 at 6:14 AM
ခုချက်ချင်း click p.၊
Nway Oo Mhan February 28, 2022 at 7:32 AM
AK 47 February 28, 2022 at 8:13 AM
ငါတို့ခေတ်မှာ အာဏာရှင် အပြီးတိုင် ကျဆုံးရမယ်
Clicker lay February 28, 2022 at 7:02 PM
Unknown February 28, 2022 at 7:53 PM
ကိုမောင် February 28, 2022 at 8:18 PM
ကလစ် ကလစ် တို့ပြည်သစ်တွက် ကလစ်။
Unknown February 28, 2022 at 8:30 PM
ကိုမောင် February 28, 2022 at 9:09 PM
အောင်ပွဲနီးပြီ ကလစ်နဲ့ချီ ထောက်ပို့တပ်သား စွမ်းနိူင်သည်။
ကိုမောင် February 28, 2022 at 9:10 PM
အောင်ပွဲနီးပြီ ကလစ်နဲ့ချီ ထောက်ပို့တပ်သား အများညီညီ။
Unknown February 28, 2022 at 9:11 PM
နေ့ခင်း duty click 💪✊
Unknown February 28, 2022 at 10:54 PM
duty အချိန်ယူ click
Thiri San February 28, 2022 at 11:08 PM
Pro ပီသ​အောင် အလုပ်လုပ်ရတယ်
ဂျူနီယာ မင်းမင်း February 28, 2022 at 11:36 PM
Shwe Nyaung March 1, 2022 at 12:04 AM
စစ်ရေးရပ်စဲကာလ ၁၀ လ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်တယ်တဲ့....ဒါကအများကိုပုံမှားရိုက်လို့ကောင်းအောင်...လုပ်ဆောင်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပဲ..ဒီထုတ်ပြန်ချက်ရဲ့နောက်ကွယ်က...ယုတ်မာကောက်ကျစ်တဲ့ အဆင့်ကိုအရှိန်တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်လို့ရအောင် လက်နက် ခဲယမ်း ရိက္ခာတွေကို စစ်ရေးအတွက် စကစ ကပြန်လည်းဖြည့်တင်းဖို့အတွက်အကွက်ချ ထုတ်ပြန်မှုလို့ယူဆရပါတယ်..တို့ပြည်သူတွေ သတိဝိရိယ ထားပြီးစကစ ကို အင်အားချည့်နဲ့ အောင်..ပုံစံမျိုးစုံ ရှုထောင့်မျိုးစုံက အရှိန်တိုးထားနိူင်ဖို့လိုပါတယ်....အာဏာရှင်မှန်သမျှထုတ်ပြန်တဲ့ စစ်ရေးရပ်စဲ တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ..သူတို့ရဲ့ထွက်ပေါက်ကို ရှာပြီး ရက်စက်ယုတ်မာဖို့ပြန်လည်စုဖွဲ့နေတဲ့သဘောပါ...
Yes...yes ..yes .
Shwe Nyaung March 1, 2022 at 12:13 AM
သူတို့မှာယုတ်မာတဲ့အကျင့်ဆိုးက... ဘယ်တော့မှစွန့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ..သတိချပ်ထားပါ...စကစ ထုတ်ပြန်ချက် တွေဟာ..သူတို့ ထွက်ပေါက်ပွင့်ဖို့ လမ်းစရှာနေတာပါ...ပြ​းေရင်..အာဏာရှင်တွေရဲ့ဗီဇအတိုင်း သတ်မယ်ဖြတ်မယ်.ရက်စက်မယ်....ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မယ် လက်နက်အားကိုးပြီးမိုက်ရူးရဲဆန်ပြပါလိမ့်မယ်...သတိရှိကြပါ...ခေါတ်အဆက်ဆက် သူတို့ရဲ့ပရိယာယ်တွေက တိုင်းပြည်အတွက်မဟုတ်ဘူး..သူတို့ရဲ့အာဏာကို အထိအပါးမခံ..မစွန့်လွှတ်ဘူးဆိုတာ.. အမြဲသတိရနေစေပါ..တို့ပြည်သူအပေါင်းတို...
Unknown March 1, 2022 at 12:17 AM
Unknown March 1, 2022 at 1:05 AM
more & more click🍅
Unknown March 1, 2022 at 2:17 AM
Chittoo March 1, 2022 at 2:22 AM
Min min March 1, 2022 at 2:46 AM
Su linn Myat March 1, 2022 at 2:56 AM
တရေးနိုးလည်းကလစ် အိပ်ခါနီးလည်းကလစ် အိပ်ရာနိုးလည်းကလစ် နေ့လည်အားလည်းကလစ်
Unknown March 1, 2022 at 4:47 AM
Unknown March 1, 2022 at 5:08 AM
Casper Owl March 1, 2022 at 5:23 AM
Unknown March 1, 2022 at 5:29 AM
Unknown March 1, 2022 at 5:49 AM
Click ရင်းနဲ့စာကောင်းတွေဖတ်ခွင့်ရတာ ကျေးဇူးပါ ဆရာ
လပျွတ် March 1, 2022 at 5:56 AM
Wine March 1, 2022 at 6:01 AM
Sweet March 1, 2022 at 6:15 AM
Unknown March 1, 2022 at 6:19 AM
Unknown March 1, 2022 at 6:27 AM
Sweet March 1, 2022 at 6:54 AM
Unknown March 1, 2022 at 7:13 AM
အရာရာအဆင်ပြေအောင်မြင်ပါစေ။ ဘေးရန်အပေါင်းကင်းဝေးပါစေ။ ကျန်းမာသက်ရှည်ပါစေ
CinCin March 1, 2022 at 7:17 AM
ကလစ် ရင်လဲ ပရို ပီသပါ၊
ကိုမောင် March 1, 2022 at 7:23 AM
ချစ်စု March 1, 2022 at 7:32 AM
Click ရင်း ဖတ်စရာ စာ​တွေတင်​ပေးတာ အရမ်းအဆင်​ပြေပါတး်ရှင် ​ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ
Than Than March 1, 2022 at 8:31 AM
Unknown March 1, 2022 at 8:41 AM
Tagyi March 1, 2022 at 9:41 AM
Like i am flim director.
Unknown March 1, 2022 at 4:10 PM
Unknown March 1, 2022 at 4:08 PM
we are clicker.
Unknown March 1, 2022 at 4:31 PM
Click daily, ever , more, all the way, for better future, we must get success.
We must won.
Unknown March 1, 2022 at 4:50 PM
1111 VPN နဲ့ဆို ငွေမဝင်ဘူးဆိုတာဟုတ်လား
Ko nyi March 1, 2022 at 4:55 PM
Unknown March 1, 2022 at 6:54 PM
Unknown March 1, 2022 at 7:09 PM
Yywai March 1, 2022 at 7:30 PM
Unknown March 1, 2022 at 8:09 PM
Unknown March 1, 2022 at 8:52 PM
Y March 1, 2022 at 9:08 PM
Unknown March 1, 2022 at 10:00 PM
Unknown March 1, 2022 at 10:16 PM
Unknown March 1, 2022 at 11:06 PM
Unknown March 1, 2022 at 11:57 PM
Shwe Nyaung March 2, 2022 at 12:38 AM
မပေါ့ဆကြနဲ့.ပြည်သူအပေါင်းတို့...စကစ ကနည်းမျိုးစုံနဲ့ တကျော့ပြန် အင်အားသုံးတိုက်ကွက်ဖော်ဆောင်နိူင်ဖို့....စစ်ရေးကာလ ကို ၁၀ လ တိုးမြှင့်ရပ်စဲလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတယ်...ဒါကအများကြားကောင်းအောင် မာယာတွေပရိယာယ်တွေကလိမ်ကကျစ်ဥာဏ်တွေပါ...သူတို့ရဲ့ဆုံးရှူံးသွားတဲ့လက်နက်ခဲယမ်း လူအင်အားကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိူင်ဖို့...အချိန်ကာလတစ်ခုကိုသတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့သုံးသပ်ရပါတယ်...ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ..သူတို့ရဲ့အာဏာတည်မြဲရေး အာဏာမဆုံးရေးအတွက် ထုတ်သုံးနေတဲ့ ကလေးအထာ စကားလုံးတွေပါ....တော်လှန်ရေးအတွက် ဆင်နွှဲနေတဲ့ပြည်သူတွေ...လုပ်စရာရှိတဲ့ဦးတည်ချက်အတိုင်း..အရှိန်လျော့မသွားပဲ...တိုးမြှင့်တွန်းလှန်ရမဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်...စကစ..ကအဖက်ဖက်က အင်အားလျော့နည်းကျဆင်းလာလို့...အသံကြားကောင်းအောင်...စစ်ရေးရပ်စဲကာလ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုတာ...သတိမူသင့်ပါတယ်....ပြည်သူတွေ...သွေးလုံးဝမအေးသွားစေပဲ.ဦးတည်ချက်ပန်းတိုင်အတိုင်းနေ့စဥ်..ဆက်လက်တွန်းလှန်သွားကြပါ...အရေးတော်ပုံ အောင်ကို..အောင်ရမည်..
ဂျပန်က nug နဲ့တွေ့ပီသူ့တပ်နဲ့ကူတိုက်ပေးရမလားလို့မေးတော့ nug ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့စဥ်းစားအုံးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့
Mhay March 2, 2022 at 1:27 AM
Unknown March 2, 2022 at 1:29 AM
Click click click every day.
Unknown March 2, 2022 at 1:52 AM
Click click 👍.
A T Oo March 2, 2022 at 2:08 AM
Su linn Myat March 2, 2022 at 4:36 AM
Unknown March 2, 2022 at 4:58 AM
Unknown March 2, 2022 at 5:30 AM
Su March 2, 2022 at 5:47 AM
Thikehtun March 2, 2022 at 5:48 AM
Elsamh March 2, 2022 at 5:52 AM
Mon lay March 2, 2022 at 6:01 AM
shwehnimway March 2, 2022 at 6:48 AM
Mo Kham Kham(zar chi) March 2, 2022 at 7:59 AM
Chittoo March 2, 2022 at 12:20 PM
Phone Naing March 2, 2022 at 6:10 PM
MyoOo March 5, 2022 at 6:40 AM
Saw War Say March 5, 2022 at 7:17 AM
Soe Paing March 5, 2022 at 5:37 PM
Neon March 6, 2022 at 1:56 AM
ZeeZee March 6, 2022 at 2:45 AM